I-China 4 TON 4 × 4 Ijika ezine zeForklift yoMvelisi kunye noMthengisi | UWilk
WIK4 ivili drive forklift iinkuphelostencils has a ngokusisigxina-wheel ezine drive, nto leyo iphucula kakhulu amandla forklift. Isithuthi sobunjineli esinokwenza ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo ukuhambisa izinto, ukothula, ukuqokelela kunye nokuphatha ukusebenza kumhlaba ongalinganiyo njengodaka, amasimi kunye neentaba. Inentsebenzo elungileyo yendlela, yokupasa ukusebenza kunye nokuhamba kakuhle. Inokuthatha indawo yeziqhoboshelo ezahlukeneyo ukuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi. Izixhobo zokulayisha nokothula izinto kumaziko osasazo lwezinto kunye neemeko zendlela ezimbi njengezikhululo zeenqwelo moya, izibuko kunye nezikhululo.
WIK 4 ivili drive forklift truck truck:
1. Inkangeleko entle, ubumbano, indawo encinci yokujika, ukukhanya kunye nokusebenza okuguqukayo, kunokusebenza kwisithuba esincinci, isiteringi esigcweleyo samandla ombane, ivili lokuqhuba kunye nesihlalo i-angle ehlengahlengisiweyo kunye nendawo yaphambi nangasemva, ukukhulisa iimfuno zomqhubi .
2. Useto lwee-joystick ezahlukeneyo zenziwe zangqinelana neemfuno ze-ergonomics ukunciphisa amandla emisebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.
3. Imasti ebanzi yokujonga, umqhubi unembono ebanzi, ke le forklift ilungele kakhulu ukulayishwa nokukothula, ukugcwala kunye nokuhamba umgama omfutshane ebaleni nangaphandle.
(1) Inokudlula okuhle kunye nokuhamba kweevili ezingaphandle kwendlela. Akukho mahluko phakathi kwee-asi kunye nobubanzi obukhulu be-off-road amavili asetyenziswayo. Ukucoca umhlaba ubuncinci kwisithuthi kungaphezulu kwe-300mm kwaye ikona yokuhamba ingaphezulu kwe-30 °.
(2) Sebenzisa isakhelo esicacisiweyo. I-engile ye-swing yesakhelo ngokubanzi ± 30 ° ~ 40 °. Inkqubo yokuqhuba ilula kwaye ayifuni ii-asi zokuqhuba ezixabisa kakhulu. Inokuphumeza irediyasi encinci yokujika, isebenzise ivili lokuqhuba ukujija isakhelo ngokuthe tye, kwaye yenze iifolokhwe zilungelelaniswe ngokulula nezinto zokwenza izinto, kwiifolokhwe ezincinci ezinqamleza ilizwe, isakhelo esidibeneyo sinokusetyenziswa, kunye ne-axle drive enye kunye nokutshixa umahluko kwi-asi ye-drive.
(3) Ukujikija amavili onke. Ngaphandle kwee-forklifts ezincinci ezisebenzisa ukwanda kweziqhoboshi zezihlangu, uninzi lwazo zii-briper disc brakes, kwaye ezinye iifolokhwe ezinobunzima nazo zisebenzisa iziqhoboshi ezimanzi. I-brake yokupaka iyona nto iqhelekileyo yokuzimela.
(4) Ngokwe-2t ~ 3t i-forklifts yelizwe eliwela ilizwe, ii-asi zangaphambili nangasemva ziqhelekile.
(5) I-asi engasemva ye-forklift yelizwe enqamlezileyo igxunyekwe kwisakhelo, kwaye i-asi engaphambili inokujija ngokuthe nkqo ± 8 ° ~ 12 ° xa kuthelekiswa nesakhelo. Isilinda esixhasayo samanzi sisethwe phakathi kwesakhelo kunye ne-asi engaphambili. Xa i-forklift iphakamisa, imasti yokuphakamisa igcinwa kwimeko ye-plumb yangoku ngokuhambisa isilinda se-hydraulic; xa i-forklift iqhuba, amagumbi aphezulu nasezantsi esilinda avumelekile ukuba agqithe kwimingxunya yokuthambisa edibeneyo, eluncedo ekuphuculeni ukukhwela kwesithuthi.
(6) Kukho ivili elikhulu lamavili kunye nelamavili. Yandisa isikhombisi kunye nokuzinza kobude be-forklift.
(7) Ukuhamba kakuhle. Esona santya siphezulu siphezulu (30-40) km / h. Into yamandla ingaphezulu kwe-0.65, ukukhawulezisa ukuqhuba kulungile, kwaye inamandla okunyuka kwe-25 ° ~ 30 °.
(8) I-engile enkulu yemasti. Oku kuyimfuneko ekusebenzeni ngokukhuselekileyo kunye nokuqhuba kumhlaba ongalinganiyo, ngokubanzi yi-10 ° ~ 15 ° ngaphambili kunye ne-15 ° ngasemva.
(9) Ukubekwa kwesihlalo somqhubi. Ukuqinisekisa ukuba umqhubi unombono ongcono ngexesha lokulayisha, isihlalo somqhubi sibekwa ngaphambili. Kwiifolokhwe ezichaziweyo, zibeke kwisakhelo esingaphambili kangangoko kunokwenzeka.
WIK 4 ivili drive forklift iinkuphelostencils iinkuphelostencils:
Umthwalo olinganisiweyo (kg)
Ukukhutshwa kobude (mm)
Umgangatho wezithuthi (kg)
Ubuninzi bokunyuka okukhoyo (°)
Ukususwa okungaphambili (mm)
Umbindi wevili levili ubekwe kwindawo yokucoca umhlaba (mm)
Ubuncinane be radius (mm)
Injini amandla (kW)
Sebenzisa isakhelo esicacisiweyo. I-engile ye-swing yesakhelo ngokubanzi ± 30 ° ~ 40 °. Inkqubo yokuqhuba ilula kwaye ayifuni ii-asi zokuqhuba ezixabisa kakhulu. Inokuphumeza irediyasi encinci yokujika, isebenzise ivili lokuqhuba ukujija isakhelo ngokuthe tye, kwaye yenze iifolokhwe zilungelelaniswe ngokulula nezinto zokwenza izinto, kwiifolokhwe ezincinci ezinqamleza ilizwe, isakhelo esidibeneyo sinokusetyenziswa, kunye ne-axle drive enye kunye nokutshixa umahluko kwi-asi ye-drive.
I-asi engasemva yesithuthi esinqamlezayo ilungelelaniswe kwisakhelo, kwaye i-asi engaphambili inokujija ngokuthe nkqo ± 8 ° ~ 12 ° ngokunxulumene nesakhelo. Isilinda esixhasayo se-hydraulic sifakwe phakathi kwesakhelo kunye ne-asi engaphambili. Xa i-forklift iphakamisa, imasti yokuphakamisa igcinwa kwimeko ye-plumb yangoku ngokuhambisa isilinda se-hydraulic; xa isithuthi sibaleka, amagumbi aphezulu nasezantsi esilinda yeHydraulic ayenziwa Ukudityaniswa komngxunya wokudampela kunceda ekuphuculeni ukukhwela kwesithuthi.
4-wheel drive forklift truck with a chassis powerful is used for loading andloading izixhobo kumaziko okuhambisa izinto neemeko zendlela ezimbi njengezikhululo zeenqwelo moya, izibuko kunye nezikhululo. Inokuqhuba kakuhle kunye nokusebenza kwendlela yezithuthi eziqhelekileyo ezindleleni kunye nokusebenza kwemizi-mveliso yeefolokhwe eziqhelekileyo. Kunokuthiwa yindibaniselwano enamandla. Isantya se-forklift engaphandle kwendlela iphezulu kunaleyo ye-forklift yesiqhelo, ebonisa ukuba ukuhamba kwayo kukwahlukile ukuze ikwazi ukuziqhelanisa nomsebenzi. Umzimba ubanzi, onokuthwala imithwalo engaqhelekanga nebanzi; ukucoca okukhulu emhlabeni kukuququzelela imiqobo yokuwela kwindawo leyo; Umsebenzi wevili eline kukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwindawo enodaka, ukwandisa izixhobo zomsebenzi, nokukothula amandla amakhulu kunye nokuqhekeza, ukulinganisa okuzenzekelayo kokukothula, ukusebenza ngokukuko komsebenzi kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwepetroli.
I-4 wheel drive forklift sisixhobo esiphambili sokulayisha kunye nokothula imisebenzi phantsi kweemeko zentsimi. Inokuqhuba kakuhle kwizithuthi eziqhelekileyo ezingekho ezindleleni kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso yeefolokhwe eziqhelekileyo. Iivili zokuqhuba ngokubanzi zisebenzisa i-herringbone, ipateni enzulu, kunye nezithuthi ezibanzi ezinqamlezayo. Amavili. Isixhobo sokuhambisa sixhotyiswe ngesitshixo somahluko okanye isixhobo esilinganiselweyo sokuqinisekisa ukuba amavili esithuthi siphela aya kutyibilika kwindlela emanzi. Ngokwesakhiwo, ukuze kuqinisekiswe ukuba isithuthi asizukuqengqeleka phantsi kweemeko ezingekho mgangathweni, ngelixa sihlangabezana nomgangatho wokuphakamisa isithuthi. Ukuqinisekisa uzinzo lwecala lesithuthi ngokwandisa i-wheelbase, ngaloo ndlela kuqinisekiswe ukhuseleko lomqhubi, isithuthi nomthwalo
I-4 wheel drive forklift isebenzisa ukuhanjiswa kweevili ezine. Iivili ezingaphambili nezingasemva ziqhutywa ngamandla. Injini yokuhambisa inokusasazwa kuwo onke amavili angaphambili nangasemva ngamanqanaba ahlukeneyo ngokweemeko zendlela eyahlukeneyo. Ixhotyiswe ngezixhobo ezichasene ne-skid, i-injini kunye noyilo lwebhokisi yebhokisi yebhokisi. Idityanisiwe kwaye inokusebenza kwiindlela ezintsonkothileyo ezinje ngezasendle, intaba, kunye neendlela ezinodaka. Amavili awayi kutyibilika ngokulula xa iimeko zendlela zimbi. Ukuhanjiswa kwamandla ubukhulu becala kukuhanjiswa kwe-hydraulic okanye ukuhanjiswa kwe-hydrostatic, enokuhamba kakuhle kunye nokudlula.
Egqithileyo I-3.5 TON 4 × 4 Ijika ezine zeForklift
Okulandelayo: Iimpawu eziphambili zesakhiwo kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji ephezulu kwi-WIK30-25 Backhoe loader
3 ton 4WD ngasemva steering Forklift Trucks
WIK20-30 4 ivili drive forklift iinkuphelostencils
3TON 4WD Forklift Iilori
3.5ton 4WD ngasemva steering Forklift Iilori
I-3.5 TON 4 × 4 Ijika ezine zeForklift